Ukulungiswa kanye namathiphu wezilungiselelo ze-FSX cfg
Umbuzo Ukulungiswa kanye namathiphu wezilungiselelo ze-FSX cfg
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #973 by DRCW
Ngama-simmers amasha ngibeke ndawonye izinto ezithile ezingenza ukuba izindiza zakho zifinyelele nakakhulu (Ama-Graphics ahlakaniphile). Okokuqala
ingxenye izokunika ukulungisa okudingekayo ku-FSX. Uma une-FSX Steam Edition ngeke kudingeke wenze lesi sigaba sokuqala.
(Lezi zixazululo zenzelwe izinhlelo nge-quad core noma i-CPU engcono kanye nendawo encane ye-RAM ye-4 noma engcono)
Ngamanye amazwi, izinhlelo eziningi zanamuhla.
Ingxenye eyodwa: izinguquko ezaziwayo nezidingekayo
Okokuqala sidinga ukufinyelela okuyinhloko Ifayela le-FSX config ( Qiniseka ukuthi usethe amawindi ukuze ubonise amafayela afihliwe namafolda )
Khetha Qala / Ikhompyutha / C: / Abasebenzisi / Igama lakho noma igama lamakhompyutha / I-Appdata / Ukuzulazula / i-Microsoft / FSX
Uma uvula ifolda ye-FSX thola fsx.cfg ifayela futhi uyivule inothi. Kufanele kubonakale kanje:
UMSINDO = 1
I-ChangeTime = i-4.000000
UkuguqulwaTime = 4.000000
I-ActiveWindowTitleTextColor = 255,255,255
I-NonActiveWindowTitleTextColor = 255,255,255
InfoBrakesEnable = Iqiniso
InfoParkingBrakesEnable = Iqiniso
I-InfoPauseEnable = Iqiniso
UlwaziSlewEnable = Iqiniso
InfoStallEnable = Iqiniso
InfoOverspeedEnable = Iqiniso
I-SKINNED_ANIMATIONS = i-1
I-WideViewAspect = Iqiniso
I-ForceFullScreenVsync = 1
Izinto Zomsebenzisi = Indiza, I-Helikopta
SimObjectPaths.0 = SimObjects \_ Izindiza
SimObjectPaths.4 = SimObjects \_ Izilwane
SimObjectPaths.5 = SimObjects \_ Okunye
Kuphakanyisiwe = 1
Indawo = 421,0,1740,1036, \_\_. \_ DISPLAY1
I-ProcSpeed ​​= i-6328
I-PerfBucket = i-7
DEFAULT_VIEW = i-0
IZINQUBO = 1
I-PANEL_MASKING = i-1
PANEL_STRETCHING = i-1
I-WindshieldIngqikithiIziphequluliEffects = 1
I-MinGustTime = i-10
I-MaxGustTime = i-500
I-MinGustRampSpeed ​​= i-1
I-MinVarTime = i-5
I-MaxVarTime = i-50
I-MinVarRampSpeed ​​= i-10
I-MaxVarRampSpeed ​​= i-75
I-TurbulenceScale = 1.000000
Isimo sezuluServerAddress = fs2k.zone.com
I-WeatherServerPort = i-80
I-WeatherGraphDataInDialog = i-0
I-DynamicWeather = i-2
LandaWindsAloft = 0
KhubazaTurbulence = 0
Imodi = 1920x1080x32
I-Anisotropic = 1
Controls_Default = Standard
I-Controls_Current = Standard
I-KBDAIL = 64
I-KBDRUD = i-64
I-Latitude = i-1,1
I-Longitude = 1,2
Ubukhulu = 1,3
Isihloko = 1,4
I-AirSpeed ​​= i-1,5
I-WindDirectionAndSpeed ​​= i-1,6
I-FrameRate = 1,1
IkhiyiweFrameRate = 1,2
I-GForce = i-1,3
I-FuelImigomo = 1,4
I-FrameRate = 2,1
IkhiyiweFrameRate = 2,2
I-GForce = i-2,3
I-FuelImigomo = 2,4
I-HeadMoveTimeConstant = 1.000000
I-VirtualCopilotActive = i-1
NUM_LIGHTS = i-8
I-EFFECTS_QUALITY = i-1
Bheka_Self = 1
Umbhalo_Scroll = 1
I-poolsize = i-0
I-PageID = 1
I-OpenATCOnCreate = 0
UMSEBENZI = C: \_ Abasebenzisi \_ Darrin \_ Amadokhumenti \_ Flight Simulator X Amafayela \_ 737
I-Map_Orientation = 2
BonisaAllACPaintSchemes = 1
KhethaAircraftManufacturer = Konke
KhethaAircraftPublisher = Konke
KhethaAircraftType = Konke
BonisaFuelAsWeight = 0
BonisaATCText = 1
I-COMM_MSG_AI_ATC_COLOR = FFFF7840
I-AutoOpenAirTrafficWindow = 1
SebenzisaPilotVoice = 1
I-pilotVoice = i-262144
I-CycleSetting = i-0
I-Airline Ubude = 25
Ubuningi = 0
I-FreewayDensity = 33
IzindizaAndFerriesDensity = 0
I-LeisureBoatsDensity = 0
IFROnly = i-0
I-ShowLabels = 1
BonisaUserLabel = 0
BonisaLabelManufacturer = 1
BonisaLabelModel = 1
BonisaLabelTailNumber = 0
BonisaLabelDistance = 1
BonisaLabelAltitude = 1
BonisaLabelAirline = 0
BonisaLabelAirlineAndFlightNumber = 0
BonisaLabelFlightPlan = 0
BonisaLabelContainerId = 0
BonisaLabelAirspeed = 0
BonisaLabelHeading = 0
I-LabelDelay = 1000
IlebulaColor = FFFF0000
I-ASLON = i-1
IMISEBENZI = 0
I-Torque = i-0.000000
I-CrashTolerance = 1.000000
Okujwayelekile = 0.000000
UnlimitedFuel = Amanga
TrueAirspeed = Iqiniso
I-AutoCoord = Yiqiniso
RealMixture = Amanga
UkucindezelekaDamage = Okuyiqiniso
GEffect = Okuyiqiniso
ManualLights = Amanga
I-GyroDrift = Amanga
CrashWithDyn = Amanga
I-CrashDetection = Iqiniso
I-AutoTrim = Amanga
VumelaEngineDamage = Amanga
I-DEMO = i-0
I-LoadWindow = 1
I-AffinityMask = 14
CITY = iTwin Falls
I-GTL_BUTTON = i-1365
I-Com_Rate = i-7
I-ControlsI-FirstRun = i-0
IkhayaPageFirstRun = 0
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ Cessna.DLL.ortccozanotwarwarnaqerloiorbuznahzlzzwcnl = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ Cessna172.DLL.naewwuikittlereqluuonlneoouooozwobobcrz = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_06_kuhlukumeza ku.GAU.bcinqoaarbwutthknnhtqauewekaekubiibzcncu = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_07_kuhlukumeza off.GAU.bcinqoaarbwutthknnhtqauewekaekubiibzcncu = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_08_kuhamba komgudu.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_10_ umlayezo wesifiso.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
I-D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_11_vidiyo ye-movie.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
I-D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_17_begin desccent.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
I-D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_18_yindlela.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_19_kugcineni.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_20_taxi kuya kwesango.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_21_kufika kokufika.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
I-D: \_ FSX \_ GAUGES \_ ama-brake-squeaking.Sound.GAU.aqrreuwiutqzttebzkrqncewurhnactlnwktwrbi = 2
bonisa_flight_history = 1
I-LineWidth = i-2
bonisa_airways = 1
bonisa_impawu = 1
bonisa_volume_boundaries = 1
bonisa_ac_twr = 1
IzwiVolume = 1.940000
Sizoqala esigabeni sokubonisa. Uma usebenzisa i-LCD Monitor nanoma yisiphi isikrini esibukhulu sizobe sifuna ukushintsha okulandelayo ku-[Display] Isigaba.
I-WideViewAspect = Amanga
Shintsha Amanga Eqinisweni
Ngaphansi kakhulu kwe [Ihluzo] isigaba engeza lokhu okulandelayo:
I-HIGHMEMFIX = i-1 ibaluleke kunazo zonke ngoba ivumela i-FSX ukuba isebenze i-tp ye-4 ku-VAS (i-Virtual Address Space) Uma usebenzisa indawo enezelayo nezindiza noma
i-autogen namanye ama-sliders kanzima ngakwesokudla. Lo mkhakha ongeziwe kufayela lakho le-config uzokusiza ukuvimbela ama-OOM ( amaphutha ememori ) Yiziphi ezivamile ku-FSX. I-Steam
I-Edition isivele ihlanganisa lolu shintsho kuwe ngokuzenzakalelayo.
Ngiphakamisa futhi ukuthi ulande I-Process Explorer at www.sysinternals.com . Leli thuluzi lizokusiza ukuqapha nokuqonda ukusetshenziswa kwe-VAS ngenkathi usendiza
ukuze ubone ukuthi i-FSX ilawula kanjani izinsiza zakho zesistimu. Kuzofakwa ohlwini nje kuphela VS ( isikhala esivamile ) Uzobona futhi ukusebenza kwe-CPU nokusetshenziswa kwe-RAM.
Ukuqonda le nqubo kuzokusiza ukuthi usethe i-FSX ngezindiza ezinde ngaphandle kwale-OOM esabekayo eyenzeka ngemva kwezindiza ze-10 yehora endleleni yakho yokugcina.
Sonke kumele sibe nesifiso sokubona inguqulo ye-64 ye-flight simulator kodwa kuze kube yilapho i-4 gigs ye-VAS yiyona engcono kakhulu ezokwenza.
Futhi ngaphansi kwe b] I-GRAPHICS [/ b isigaba yilona umugqa olandelayo:
Shintshela ku-2048 noma ku-4096
Ngokuzenzakalelayo i-FSX isethelwe ku-1024 njengendlela ejwayelekile engeyona incazelo ephezulu. Awunakujabulela ngempela ihluzo ze-HD kusikrini sakho se-widescreen ngale ndlela. Ezinye izindiza wena
ukulanda (ukukhokha) ngeke kubonise ukuthi kungenzeka ngaphandle kokuthi leli gama libekwe ku-4096. Futhi futhi i-Steam Edition isivele isethiwe ku-4096 ngokuzenzakalelayo. Ungakwazi
futhi zama i-2048 okwamanje i-HD. Kuzoxhomeka kuwe nge-fps (ozimele ngomzuzwana) Qaphela: Uma ushintshe izilungiselelo zakho (Izixhumanisi) ku-FSX uzodinga ukusetha kabusha lo mkhakha owodwa
njengoba izobuyela emuva kokuzenzakalelayo i-1024.
Okungenhla yilo mthetho jikelele. Kufanele uqale i-FSX ngemuva kokwenza i-3 ngenhla izinguquko bese uqhuba indiza emfushane phezu kwendawo ovame ukuyihamba. Ngiyazi ukuthi uzoqaphela a
Isigaba se-2: Ukulungiswa kwezinto ezibucayi ngokujwayelekile.
Ngincoma emva kwalolu shintsho olulandelayo osebenzisa i-FSX ngakho uma unenkinga nge-fps ungakwazi ukuvala uhlelo bese usetha kabusha umugqa emuva kokuzenzakalelayo. Ngempela
kuncike ohlelweni osebenza ngalo ku-FSX. Nginomprosesa we-8 Core ngekhadi le-2 ephezulu ecacile ekhishwa emlilweni we-firewire no-16 ama-RAM wokusebenza okuphezulu.
Okulandelayo ku www.simforums.com/forums/new-twea...25507.html
I-Tweak #1 - I-Fiber Frame Fraction
Ukuze unciphise lesi sizathu sezimpawu, iMicrosoft isebenze kabusha indlela i-Flight Simulator X isimiso esivela ngayo kuqala imisebenzi ye-FSX. Manje sekukhona isikhathi esiningi se-CPU
ezinikele ekulayisheni idatha yendawo, kufaka phakathi izakhiwo zomhlaba, ngezindleko zesikhahla esincane. Ngombono wami, lolu shintsho luye lwaxazulula le nkinga
ukufiphaza, nakuba umthwalo wesimo esingaba khona ungasenhla ngemuva kokulinganisa okuphansi kakhulu (ngaphansi kwama-fps we-10) noma ngesivinini somoya esheshayo (ngokushesha kunama-600 knots). Bangu
izindlela eziningana zokulungisa ukuthi ingakanani isikhathi se-CPU esiphezulu sokulayisha indawo nokuthungwa. Indlela elula kakhulu ukusetha islayidi yesilinganiso sefreyimu esilindelekile kunani lakho
umshini ungazuza ngokugcwele. Okuphansi ubeka isilayidi, isikhathi esiningi se-CPU siphambukiswa ekunikezeni ukulayisha idatha. Enye into ongayenza ukuguqula
okulandela ukuguquguquka ku-FSX.CFG:
I-FIBER_FRAME_TIME_FRACTION inquma inani eliphakeme lesikhathi ngasinye ngohlaka oluzosebenza ngemfayibha emcimbini oyinhloko. Silinganisela ukuthi kuthathe isikhathi esingakanani ukulinganisa nokunikeza futhi bese ukwandisa leso sikhathi ngo-FIBER_FRAME_TIME_FRACTION ukuze ubone ukuthi usebenza isikhathi esingakanani ukuze usebenzise izintambo. Isibonelo, uma kuthatha i-10 millisecond ukulinganisa nokunikeza futhi i-FIBER_FRAME_TIME_FRACTION isethelwe inani elizenzakalelayo le-0.33, khona-ke sizovumela ukuthi izintambo emcimbini oyinhloko zigijime kuze kufike ku-10 * 0.33 = 3.3 millisecond. Ngezilinganiso zeqhezu ze-1.0 ne-2.0, isikhathi esinikezwe amafayili singaba yi-10 millisecond kanye ne-20 millisecond, ngokulandelana.
[n = 0.01 - 0.99] Ngokomphakathi we-Quad noma izinhlelo ezingcono zama i-0.70
Kuye kwashiwo imishini eminingi eyinhloko ukuthi le ngenhla ayidingi futhi yingakho okuzenzakalelayo kuyi-0.33. Ngangivele ngizame futhi ngithole ukuthi yayisize yangisiza ngempela. Njalo uhlelo alufani nezinhlanganisela ze-hardware ne-software. Ngakho-ke kufanele uhambisane nezilungiselelo ezihamba phambili ohlelweni lwakho ngalunye. Izici eziningi zisebenza. Ngifisa sengathi ngingasho ukuthi kukhona incwadi eyodwa ehambisana nesixazululo, kodwa ayikho. Uma unenkinga nge-FPS (ozimele ngomzuzwana) kusistimu yakho manje ngaphambi kokuba uqale ukukhipha I-imeyili ngiphakamisa ukuthi ukuxazulula le nkinga kuqala ngokubeka iziphakeli endaweni lapho umshini wakho usebenza ngokuqhubekayo futhi ugcine khona. Hlola umshini wakho phezu kwendawo enesidingo bese uzama ukulondoloza i-20 fps. Ungasetha okwesikhashana i-fps limiter ukuze ungenamkhawulo futhi ugijimise i-FSX ngokusebenzisa izinyathelo zayo, bese uyibuyisela emuva ku-30fps (isigamu isilinganiso noma iziqapheli zakho zivuselela kabusha) Uma ucabanga ngokumemeza okunzima futhi ukunikeza ikhompyutha nje nge-flight simulator indlela yokuhamba. Uzogcina okuningi kwe $$$ ngokwakha uhlelo lwakho.
In the b] ITERRAIN [/ b ingxenye yilezi ezilandelayo:
Shintshela ku-6.500000 kuze kufike ku-7.500000
Isimo esingenhla sinquma ibanga FSX idonsela indawo (ubukhali) bese isebenza no-TIME_FRAME_TIME_FRACTION.
Ukushintsha lo mzila kuzokwandisa ukugxila ekude kwendiza. (Qaphela ukuthi kuzokwandisa ukusetshenziswa kwakho kwe-VAS kancane)
Qiniseka ukuthi lokhu kusethwe ku-DETAIL_TEXTURE = 1
Lokhu kuyoba yinzuzo ngokushesha kubasebenzisi bezithombe ezibukeka kahle. Uzobona ukuthungwa okungcono kunotshani emhlabathini ophansi kanye nokuthuthukiswa okukhulu kwamehlo amaningi ebusweni emoyeni ebheka phansi.
Isigaba 3: Ukusiza ukukhipha umthwalo ku-FSX. Ungasiza ihluzo zakho ngokuqhubekayo ngokuba nekhadi lakho le-HD ihluzo ukwenza umsebenzi we-CPU yakho.
Nawa amanye amavidiyo awusizo:
Ividiyo elandelayo ivela ku-Flight Sim Addict futhi uyazi okuningi zokulungisa. Ngicabanga ukuthi uyilungu leQembu le-REX.
Ngisebenzisa i-Megascenery ne-Blue Sky futhi iningi layo. Yingakho ngine-2 TB HD enikezelwe ku-FSX. Nakuba ngingadingeki ngikhathazeke nge-autogen, indawo yesithombe ingaba inselele ezindiza ezingeni eliphansi uma kuziwa ekubukeni. Ngasebenzisa ama-tweaks angenhla ukuthuthukisa ubuciko ku-500 futhi ngaleyo ndlela ngenza ukuthutha kwami ​​nokuhlelwa kwezinto ngifinyelele nakakhulu.
Ukuzuzisa okuyinhloko kwendawo yesithombe ngaphandle kwe-autogen ukusetshenziswa kwe-VAS kungaphathwa kangcono kanye ne-10 fps ukwandisa ukungakhulumi ngokucacile okushiwo ukuthi uyaphi. Kuzohlale kube nezimo ezidinga ukuningi nokuningi kodwa kuzohlale kube nesenzo sokulinganisela ukuvimbela ukuphazamiseka kohlelo kuze kube yilapho kukhishwa isikhulumi sangempela se-64. Ukuphathwa okuhlakaniphile kanye nokuqonda okuhle komshini wakho kuzohamba ngendlela ende ukwenza i-FSX ibe yipulatifomu ejabulisayo neyesimeme.
Ngithemba ukuthi lokhu kukusiza ekusebenzeni futhi kwenza u-FSX ngaphezulu kohlelo lwesimanje.
Isikhathi ukudala page: 0.205 imizuzwana